Na Eo Aza Ny Fanoheran’ireo Orinasa, Miroso Ho Amin’ny tolodalàna “Zo Hohadinoina” i Rosia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Jona 2015 7:30 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Deutsch, Español, English
Sary nataon'i Tetyana Lokot.
Nihetsika malaky ny Domà-mpanjakana Rosiana tamin'ny fandaniana tolodalàna vaovao iray izay hitakiana amin'ireo fitaovana fikarohana mba hamafa ny rohy mankany amin'ny mombamomba sy ny votoaty, niainga avy tamin'ny fangatahan'ireo mpampiasa. Ny Alakamisy 11 Jona teo, nanolo-kevitra ny handanian'ny parlemanta ny drafitra voalohany tamin'ilay tolodalàna ‘zo hohadinoina’ ny kaomity parlemantera momba ny politikan'ny fampahalalam-baovao, araky ny tatitry ny RBC.
Miteraka sehatra iray voafaritra ho an'ny “zo hohadinoina” ao Rosia ilay tolodalàna vaovao, nampidirin'ireo mpanao lalàna tamin'ny 29 May, izay hitakiana amin'ireo fitaovana fikarohana ety anaty aterineto hamafa ny rohy rehetra mankany amin'ny fangatahana angon-drakitra momba ny olona tsirairay, tafiditra amin'izany ireo zavatra hita fa diso na misy indro kely. Mety ho fafàna ihany koa ireo rohy mankany amin'ny angon-drakitra azo itokiana saingy efa maherin'ny telo taona. Ny hany zava-maningana ao anatin'ity resaka ity dia ny momba ireo raharahana heloka bevava sy ireo dingana tsy mbola tonga hatramin'ny farany.
Tadiavin'ireo mpanao lalàna ny fomba hametrahana sazy ara-bola amin'izay fitaovana fikarohana tsy manaraka ireo fitakiana famafàna : 100.000 robla (1.800 dolara) ho an'ny tsy fanomezana fahafahampo ao anatin'ny andro telo tamin'ny fangatahana hanesorana, na hatramin'ny 3 tapitrisa robla (54.700 dolara) raha toa ilay tranonkala misy ilay fitaovana ka tsy mamàfa ireo rohy na dia taorian'ny famoahana didim-pitsaràna aza.
Iray amin'ireo nanoratra ilay tolodalàna i Aleksey Kazakov, izay nilaza fa miainga avy amin'ny didim-pitsaràna ihany no tokony hahavoatery ireo fitaovana fikarohana hamafa rohy, nefa koa mety ho afaka mamafa azy ireny amin'ny nahim-pony mifanaraka amin'ny fangatahan'ny mpampiasa iray ao aminy izy. Iray hafa mpiara-manoratra ilay tolodalàna i Vadim Dengin, izay nanamafy fa “zon'ny olona iray ny ho hita ao anaty aterineto araka izay faniriany, sy manitsy ny valin'ny fikarohana raha toa izy ireny ka mampiseho ‘lafy ratsy’ mikasika an-dry zareo.
Nisedra kiana avy amin'ny Indostria Rosiana misahana ny aterineto ilay lalàna vaovao : niteny tamin'ny tranonkalam-baovao Meduza ny Yandex, goavana amin'io resaka fikarohana io, fa mety hanitsakitsaka ny zo nomen'ny lalàm-panorenana mba hahazo vaovao ny lalàna iray tahaka izany, ary hampibaby vesatra apetraky ny lalàna tsy ho eran'ny aina sy tsy mahazatra an'ireo fitaovana fikarohana. Ny vaovao manafintohina, na ahoana na ahoana, hoy ny finoan'ny Yandex, dia hijanona ety anaty aterineto, hiely manerana ireo tranonkala toy ny tambajotra sosialy.
Naneho ny tahony ireo sasany naneho hevitra, hoe mety hoararaotina ihany ilay lalàna mba hanesorana ireo vaovao tsy tiana ho hita amin'ireo vokatry ny fikarohana. Oleg Yashin, filoha lefitry ny “Russian Shield”, fikambanana mpiaro ny fizakàmanana ara-tsaina, niteny fa mety ho ilaina ireo fitaovana fikarohana mba ho amin'ny famotsiana na fanavahana atao an'ireo voka-pikarohana miaty tranonkala voabahana na angon-drakitra tsy ara-dalàna.
Ny fomba fanao amin'ny famafàna votoaty avy amin'ireo voka-pikarohana no efa anton-dresaka tany amin'ny firenena Eoropeana maro. Tamin'ny May 2014, Namoaka didim-pitsaràna tsy mbola nisy toa azy nankasitraka ilay “zo hohadinoina” ny Fitsarana ao amin'ny Fiombonambe Eoropeana. Takian'ilay didy ny hametrahan'ny Google rafitra iray hahafahan'ny tsirairay ao amin'ny Fiombonambe Eoropeana mitaky amin'ireo orinasa mba hanaisotra ny sasantsasany amin'ny voka-pikarohana ao aminy rehefa miaty zavatra efa lany andro na heverina ho “tsy mitombina” intsony izy ireny. Raha toa ka manana andalana somary hafa momba ireo karazana votoaty sy ny antony hamafàna aza ilay lalàna Rosiana, dia miteraka ahiahy mitovy amin'izay ihany momba ny andraikitr'ireo mpanelanelana amin'ny resaka vaovao sy ny vintana mety hisian'ny fanararaotana ny lalàna mifehy ny aterineto Rosiana.